HS:-Waxaa dhawaan safar ku tagay geeska Africa amaba hadaan si kale u dhigno dalka Soomaaliya Prof C/Nuur Sheikh Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalka Mareykanka kaasi oo booqashadiisu iskugu jirtay u guurgelida xaalada guud ee dalka gaar ahaan mida shacabka Hiiraan oo uu la soo joogay halkaas.
Inkasta oo aanu halkaan ku soo koobi karin warbixintii uu Prof-ka u jeediyey tiradii ugu badneyd ee jaaliyad reer Hiiraan ah kuna kala sugnaa dunida dacaladeeda ayaa hadane waxaa la dhihi karaa waxey aheyd mid aad loo jecleystay maadaama uu intii nasiibka u yeelatay iney ka soo qeybgalaan aad ula dhaceen warbixino badan oo ay aad ugu baahnaayeen xaqiiqadooda oo uu Prof Ku si waadax ah ugu sheegay dadyoowkii shirka ka soo qeybgalay.
Sida aanu la socono aduunyadan aanu ku nool nahay waa tuulo oo kale (Global Village) hayeeshee iyadoo la isticmaalayo aalad casri ah ayaa waxuu Prof C/Nuur shirka uga qeybqaatay hab casri ah oo u sahlaya dhamaan dad kala jooga meelo fog fog sidii waxey joogaan oo kale hal meel taasi aheyd mid dad badan kulmisay.
Hadaanse dib ugu laabano warbixinada uu Prof u jeediyey dadkii ka soo qeybgalay shirkaas waxaa ugu muhiimsanaa.
1- Warbixin dhameystiran oo ay ka muuqatay aqoon iyo xilkasnimo taasi oo badankeed ka hadleysay wacyiga guud ahaan dalka ka jira gaar ahaan habkii loogu soo dhaweeyey caasimada Hiiraan iyo mudadii uu joogay waxii uu ku soo arkey si uu xog ogaal uga dhigo aqooyahano, waxgarad, iyo ganacsato reer Hiiraan ah oo shirka siweyn u soo camiray mudo fogna qurbaha ku noolaa.
2-Sidii looga qeybqaadan lahaa horumarka guud ee dalka oo ay Hiiraana qeyb ka tahay si buu yiri bulshada Hiiraan uga qeybqaataan nidaamka federalka oo hada u muuqda in ay uga qeybqaadan doonaan rabitaankooda lana taageero shirweynaha aayakatashiga bulshoweynta Hiiraan.
Inkasta oo aanu halkaan ku soo koobi karin dhamaan qodobadii uu ka hadlay hadane waxuu ahaa shirkaas mid ay jaaliyada Hiiraan siweyn ugu baahnaayeen warbixinta uu Profka ka jeediyey halkaas maadaama ay badankood wadanka ugu danbeysay mudo fog.
· admin on April 14 2015 21:16:04 · 0 Comments · 1380 Reads ·
14,568,343 unique visits